PUBG Game ဆော့ရန် specification ကို ဘယ်လိုရွေးချယ် ဝယ်ယူသင့်သလည်း – eazycorner
Feb 16, 2021 game pc specification, pubg game, pubg game specification
PUBG သည် စစ်ပွဲ ဂိမ်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် လူကြိုက်အများဆုံး ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။ PUBG ဂိမ်းဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့လည်း ကစားလို့ရသလို့ Mobile phone နဲ့လည်း ကစားလို့ရပါတယ်။
အခုကတော့ တစ်ချို့ PUBG game ဆော့ချင်ပေမယ့် game ဆော့ဖို့အတွက် PC ဝယ် ချင်တယ် ဘယ်လိုအမျိုးအစားကို ဝယ်ရမှန်း မသိတဲ့သူတွေ ?
Phone ဝယ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လောက်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ Specs ကို ဝယ်ရမှန်းမသိသောသူ ?
ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးသား စက်နဲ့ ဆော့လို့ ရနိုင်လား ?
ဆော့ရန် အတွက် install တော့လုပ်ထားပေမယ့် ဆော့လိုက်တိုင်း Not responding ဆိုပြီး စာသားပေါ်ပြီး ဆက်ပြီး ဆော့လို့မရလို့ စိတိညစ်နေတဲ့သူအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဒီစာလေးရေးပေးပါတာ။
PUBG ဟုလူသိများသော Player Unknown’s Battlegrounds သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး တရှိန်ထိုးအောင်မြင်မှုရရှိလာခဲ့တဲ့ ဂိမ်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အခုကတော့ ပီစီနှင့် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း နှစ်ခုလုံးအတွက် အနိမ့်ဆုံး ဘယ်လောက်လောက် specification ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်သလည်း ဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားမှာပါ။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အမြင့်ဆုံး၊ နောက်ဆုံးပေါ် gaming စက်တွေ၊ mobile တွေ ဝယ်ဆော့နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဝါသနာကြောင့်သာ ပစ္စည်းဝယ်မသုံးနိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အတော်စဉ်းစားရမယ့် အချကိပါ။
PUBG ဆော့မဲ့သူများအတွက် Computer PC မှာ အနိမ့်ဆုံး (ရှိသင့်တဲ့) လိုအပ်တဲ့ system ကတော့ PUBG Corp မှ developer တစ်ယောက် ပြောပြချက်အရ game ဆော့မယ့် (အခြေခံ) လိုအပ်ချက်က အရင်က CPU Core i3-4340ကနေ ယခု Core i5-4430 ထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီး RAM 6GB ကနေ 8GB ထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ Graphic ကိုလည်း GTX 660 မှ GTX 960 ထိ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
* OS – 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
* Processor – Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
* Memory – 8 GB RAM
* Graphics – NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
* Network: A broadband Internet connection
* Storage: 30 GB of free space
PUBG ကို PC နှင့် ဆော့မည့်သူများအတွက် အကြံဉာဏ် (recommend) ပေးချင်တဲ့ system လိုအပ်ချက်ကတော့ အပေါ်က system လိုအပ်ချကိတွေနှင့်သုံးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ပြဿနာက မြန်မြန်မရွေ့နိုင်လို့ နောက်ကျတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ စက်လေးတာကြောင့် တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် PUBG တိုက်ပွဲတွေ ဆော့တော့မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ Specs လေးတွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ရင်တော့ ဖလမ်းဖလမ်းနဲ့ဆော့ရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်
* CPU: Intel i5-6600K / AMD Ryzend51600
* GPU: nVidia GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
* Direct: 11.0
Android တို့ iOS တို့နှင့် ဆော့လို့ကြိုက်သူများအတွက် တစ်ချို့ PC ကိုမကြိုက်ဘဲ ရောက်လေရာ အရပ်မှာ ဆော့ချင်သူများအတွက်ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်ကလေးရှိတဲ့ ဖုန်း Specs လေးတွေ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ် Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် Android versions 5.11 နှင့်အထက်ကိုသုံးသင့်ပြီး RAM ကတော့ အနည်းဆုံး 2GB ရှိရပါမယ်။ IOS အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် iPhone 5S နှင့် 5S အထက် iPad ဆိုလျှင် iPad2နှင့် iPad2အထက်၊ ios version ကတော့9နှင့်9အထက်ရှိတဲ့ Phone များ၊ Tablet များကိုသာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိအောင် အဆင်ပြေနေမှာပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
၂၀၂၁ အတွက် အကောင်းဆုံး နှင့် အပေါ့ပါးဆုံး printer လေးများ